Malware-ka loogu talagalay macOS wuxuu ku kordhay 1000% sanadka 2020 | Waxaan ka socdaa mac
Faa’iidada MacOS waxay kordheen 1000% sanadka 2020
Haddii ay dhacdo in qof walboo u maleynayo in fayrasyada, khayaanada iyo wixii la mid ah ay ahaayeen wax Windows ah, aad bay u qaldan yihiin. Maadaama Windows-ka uu yahay midka ugu baahsan adduunka, waa bartilmaameedka ugu weyn ee burcad-badeedda. Si kastaba ha noqotee, koritaanka macOS, kan sidoo kale ayaa kuu noqonaysa yoolkaaga.
Malware wuxuu noqday, asxaabta dadka kale, mudnaan sanadihii la soo dhaafay, iyadoo 2020 ay tahay sanadkii ay aad u kordhay. Aad ayey u kordhay ka fiicnaaday dhammaan malware-ka loo abuuray macOS intii u dhaxeysay 2012 iyo 2019. On Windows waxay ahayd xitaa ka xun.
Sida ay sheegeen wiilasha Atlas VPN, khayaanada ku jirta Windows ayaa 135 jeer ka sareysey midka loogu talagalay nidaamka deegaanka ee macOS, xitaa sidaas oo ay tahay, tani waxay ku kordhay in ka badan 1000%. Gaar ahaan, 674.273 shaybaarro cusub oo khaldan ayaa laga helay sannadka 2020, marka la barbardhigo 56.556 oo la ogaadey 2019. Sannadkii 2018, tirada hanjabaaduhu waxay ahaayeen 92.570.
Laga soo bilaabo Atlas VPN waxay hubiyaan in:
Wax ku biirinta rikoodhkan kororka hanjabaadaha ayaa ah xaqiiqda ah in softiweerka cusub ee xaasidnimada ah uu hadda ka fudud yahay injineernimada sidii hore. Maanta, haakarisku xitaa uma baahna xirfadaha barnaamijyada horumarsan maadaama ay iibsan karaan koodhadh diyaar ah oo furin ah, kuna waafajinayaan baahidooda lambar sir ah, isla markaana abuurayaan khatar cusub.
2021 waxay umuuqataa in hada aan laga hari doonin. Dhowr toddobaad ka hor, cilmi baarayaashu waxay ogaadeen khayaanada Shimbir baalal qalin ah, Fariintii ugu horeysay ee lagu bartilmaameedsado labada kumbiyuutar oo ay maamusho processor Intel sida Apple's M1.
Ku saabsan barnaamijka Microsoft, cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in ka badan 91 milyan oo tijaabo ah oo loogu talagalay khayaanada sanadka 2020, ficil ahaan isku mid ah sida 2019.
Ma la joogaa waqtigii lagu rakibi lahaa antivirus Mac-keena?
Waxay kuxirantahay. Aniga oo ah isticmaale joogto ah labada Windows (iyo sidoo kale macOS), waxaan ahaa dhowr sano aniga oo aan isticmaalin nooc antivirus ka baxsan midka Microsoft ay ku jirto asal ahaan loo baabtiisay Difaaca Windows.
Sida iska cad, waan ogahay bogagga aan galayo iyo waxa aan soo dejinayo, haddaba Uma baahni inaan rakibo wax kale oo talaabo ilaalin ah oo ay Microsoft i siiso.
Haddii tirada hanjabaaduhu sii kordhaan, waxay u badan tahay in Apple lagu qasbi doono abuur nidaam ilaalin, nooc ka mid ah antivirus xitaa haddii aadan rabin inaad ugu yeerto taas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Faa’iidada MacOS waxay kordheen 1000% sanadka 2020
Podcast 12 × 23: Nabadeey HomePod
Ku dhowaad 5.000 bilyan oo ay maalgashadeen Apple tamarta cagaaran ayaa bixinaya